GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ụfọdụ ndị na-ekwu na akụkọ Baịbụl kọrọ banyere Paradaịs bụ akụkọ ifo. Ebe ndị ọzọ na-ekwu na o yiri ebe mmadụ mụ anya na-arọ nrọ ebe mara mma. Ná nrọ ahụ, ya ana-ahụ ebe ndị ezigbo mmadụ dị ndụ ebighị ebi ma na-arụ ọrụ ndị na-atọ ha ụtọ.
Ihe ndị mmadụ na-akpọ ogige Iden ebe Adam na Iv biri bụ Paradaịs. (Jenesis 2:7-15) Baịbụl kwuru na e nwere ebe bụ́ ogige Iden n’eziokwu, ebe ọrịa na ọnwụ na-adịghị. (Jenesis 1:27, 28) Chineke mechara chụpụ Adam na Iv n’ebe ahụ n’ihi na ha nupụụrụ ya isi. Ma, ọtụtụ amụma ndị dị na Baịbụl kwuru na Chineke ga-eme ka e nwee Paradaịs n’ụwa a ọzọ.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Paradaịs